Wednesday June 24, 2020 - 19:44:37 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Hoggaamiye sare oo katirsanaa dowladda Sacuudiga islamarkaana macluumaadyo xasaasi ah ka ka haya qoyska haya talada aala sacuud ayaa si lama filaan ah dibadda ugu baxsaday.
Sacad Aljabri oo horay jago sare uga hayay sirdoonka Aala Sacuud ayaa la xaqiijiyay in uu ubaxsaday dalka dibaddiisa arrinkaas oo walaac ku beeray Max'med Bin salmaan oo ah dhaxal sugaha sacuudiga iyo wasiirka difaaca.
ilo wareedyo ayaa sheegaya in Sacad uu mar kamid ahaa dadka sida aadka ah ugu dhow bin salmaan islamarkaana uu kamid noqday golaha wasiirada sacuudiga.
Ciidamada sirdoonka Sacuudiga ayaa magaalada Riyaad ka xiray laba kamid ah awlaadda sarkaalka baxsaday si ay qoyskiisa ugu cadaadiyaan in Sacad Aljabri uu dalka dib ugusoo laabto.
qoyska Aala sacuud ayaa wadnaha farta ku haya waxayna ka baqayaan in sarkaalkan baxsadka ah uu faafiyo macluumaad sir ah oo uu ka hayo qaabka ay ushaqeyso dowladda sacuudiga, malafaatka muhiimka ah ee ninkan gacanta ugu jira waxaa kamid ah dhaqaalaha gaarka ah ee ay leeyihiin Salmaan iyo wiilkiisa.
ilo wareedyo ayaa sheegaya in mas'uuliyiin sarsare oo kamid ah wasaaradda arrimaha gudaha Aala Sacuud loo xiray sababa laxiriira baxsashada Sacad Aljabri oo ay aad isugu dhowaayeen Max'med Bin Salmaan balse ay kala fogaadeen markii xilka laga qaaday Max'med Bin Naayif wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ahaana dhaxal sugaha wadanka.
Warbaahinta reergalbeedka ayaa sheegtay in Sacad Aljabri uu galay wadanka Canada oo sanadadii dambe marti gelinayay inta badan mucaaradka nidaamka Aala Sacuud.
Baxsashada mas'uulkan ayaan dhabar jab ku ah Max'med Bin Salmaan oo xusulduub ugu jira sidii uu xilka ugala wareegi lahaa aabihiis oo 85 sana jir ah.